Pioneer Grain Quality Assessment Kit - Pioneer Agrobiz
Pioneer Grain Quality Assessment Kit
ဆန်နှင့်စပါးတို့၏ အရည်အသွေးကို ဤအရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့် သေတ္တာအတွင်းရှိ ကိရိယာ တန်ဆာပလာများဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည် ..
အထူးသဖြင့် မျိုးစပါးထုတ်လုပ်သူများ၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စပါးကုန်သည် ပွဲစားများ .. ဆန်ကုန်သည်များ .. စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းများ၊ Exporter များ၊ ပြည်တွင်း NGO၊ INGO များ အတွက် အထူးအသုံး၀င်ကာ ဆောင်ထားသင့်သည့် Pioneer Grain Quality Assessment Kit သေတ္တာငယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်စပါးနှင့် သီးနှံများရဲ့ အရည်အသွေးကို ကောင်းစွာ အကဲဖြတ်နားလည်နိုင်စေရန်၊ မိမိ၀ယ်ယူသော ဆန်စပါးသီးနှံများရဲ့ အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်သေချာစွာ အကဲဖြတ်နိုင်ရန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် အခန်းကဏ္ဍများတွင် ကောင်းမွန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်စေရန် အတွက်ရည်ရွယ်စုစည်းပြုလုပ်ထားပါသည်။
ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များအတွက်လည်း စပါးဝယ်ယူရေးတွင် အရည်အသွေးကို စက်မကြိတ်ခွဲမီ ကြိုတင်အကဲဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက် ရောင်းမှား ဝယ်မှား မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
ဆန်စက်များတွင် ယင်းကိရိယာ သေတ္တာငယ်အားဖြင့် ဆန်စပါးအရည်အသွေးစစ် ဓာတ်ခွဲခန်းငယ် Mini-Grain Quality Laboratory အနေဖြင့် ထားရှိကာ မိမိဝယ်ယူမည့် စပါး၏ အရည်အသွေး .. ဆန်ကြိတ်ထွက်နိုင်မည့် နှုန်းကို ခန့်မှန်း တွက်ချက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် .. ထို့ကြောင့် ယင်းသေတ္တာအားဖြင့် .. ရောင်းမှားဝယ်မှား ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်မည်ဖြစ် သောကြောင့် .. ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် .. မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်သော ကိရိယာ သေတ္တာ ဖြစ်ပါသည် ..
1. Graduated Cylinder –
ဆန်သား/ဆန်ကျိုး တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည့်အမှတ်အသားပါ၀င်သော ချင်တွယ်တိုင်
2. Professional Mini Digital Scale –
ဒီဂျစ်တယ် အလေးချိန်တိုင်း ကိရိယာငယ်
(1000 grain weight အစေ့တစ်ထောင် အလေးချိန်တိုင်းတာခြင်း အစရှိသည်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။)
3. Length- Width Cliper –
ဆန်၊ စပါးတို့၏ အလျား၊ အနံ တို့ကို တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ
4. Infrared Thermometer –
အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ
(ဆန်ကြိတ်ခွဲချိန်နှင့် အခြောက်ခံချိန်တို့တွင် ဆန်စပါးတို့တွင်
သက်ရောက်သော အပူချိန်ကို တိုင်းတာရာတွင် လက်ဖြင့်ထိတွေ့စရာမလိုပဲ အဝေးမှတိုင်းတာနိုင်သည်။)
5. Indented Sheet Grader-
( ဆန်သားတွင် ဆန်ကွဲမှတ်ပါ၀င်မှုနှုန်း တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသည်။)
သီးနှံကြည့် မှန်ဘီလူး (LED မီးပါ၀င်သည်။)
(သီးနှံပုံကြီးချဲ့ ကြည့်ခြင်း ၊ ဆန်၊ လုံးတီး အကျိုးအကြေ၊ အကွဲကြောင်း၊ အင်းဆက်၊ မှိုစ သည်တို့ကို စစ်ဆေးရာတွင်သုံးသည်။ )
7. Leaf Color Chart-
စပါးပင် အရွက်အရောင်တိုင်း ကဒ်ပြား
(ကဒ်ပြားတွင်ပါ၀င်သောအရောင်ဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စပါးပင်၏ နိုက်ထရိုဂျင်လိုအပ်မှု အနေအထားကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။)
8. Temperature Hygrometer-
အခန်းတွင်း အပူချိန်နှင့် ပတ်၀န်းကျင်စိုထိုင်းဆပြ ကိရိယာ
(ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် အရည်အသွေးတိုင်းတာသည့် အခန်းများအတွင်းရှိ အပူချိန်နှင့် လေထု စိုထိုင်းဆကို စောင့်ကြည့်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။)
စျေးနှုန်းမှာ US$200 ဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်မေးမြန်း/မှာယူလိုပါက..
ဋ-၁၄၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- 09445566404 , 09445566505